Haydarpaşa Garı Hakkında Hiç Bilinmeyenler..! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Haydarpaşaမီးရထားဘူတာ။
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
haydarpasa gari အကြောင်းကိုမသိသော
Sakalar နှင့် Scythians (The Hidden Old Anatolian People) တွစ်တာအကောင့်သည်Haydarpaşaဘူတာရုံ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေစဉ်ဘူတာရုံ၊ Ottoman Empire ၏ပထမ ဦး ဆုံးသောစီမံကိန်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။
တွစ်တာအကောင့်ခွဲဝေမှုမှ Sakalar နှင့် Scythians (Hidden Old Anatolian People) သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ” Haydarpaşaမီးရထားဘူတာရုံ၊ 4760 km Hicaz မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းသည် 91 ကီလိုမီတာHaydarpaşa-Izmit နှစ်၏အစအဖြစ်21873 ကိုဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ဤကြီးမားသောစီမံကိန်း၏အယူအဆမှာဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာ Wilhem Von Pressel ဖြစ်သည်။ Sultan Abdulaziz သည် Pressel ကို Asian Ottoman မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသို့ယူဆောင်လာသည်။ (1872) ဤစီမံကိန်းကိုအလှူငွေများနှင့်အတူ Damascus-Hejaz (ဆော်ဒီအာရေဗျအနောက်ပိုင်းဒေသ၊ မက္ကာ၊ မက်ဒီနာနှင့်တိုင်ဖ်အပါအ ၀ င်) ရှိ 1901-1908 နှစ်များအကြားအပိုင်းအစများအရတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အလှူငွေများကိုလှူဒါန်းမည်ဟုကြေငြာသောအခါကန ဦး ကဤကြီးမားသောစီမံကိန်း၊ အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်နှင့်အီတလီလူမျိုးများမပြီးနိုင်ပါ။ အော်တိုမန်အင်ပါယာသည်မွတ်စလင်များကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ မော်ရိုကိုနှင့်အီဂျစ်မွတ်စ်လင်မ်များပင်စီမံကိန်းကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပထမဆုံးကြီးမားသောလှူဒါန်းမှုမှာ 75.000 တစ်ပြားဖြစ်သည်။ Grand Vizier သည်ဤလှူဒါန်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Sultan II ။ Abdülhamidနှင့်ထိုကာလ၏ပြည်နယ် ၀ န်ထမ်းများသည်ပထမဆုံးအလှူငွေများဖြင့်စီမံကိန်းကိုစတင်သောအခါအီဂျစ်၊ မော်ရိုကို၊ အိန္ဒိယနှင့်ရုရှားရှိမွတ်စ်လင်မ်များလည်းအလှူငွေများကိုမိုးရွာခဲ့သည်။ အီဂျစ်ရှိခရိုင်တိုင်းနီးပါးတွင်လှူဒါန်းရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
တဖန်တုံ၊ အစပိုင်းတွင်စီမံကိန်းအတွက်ပထမဆုံးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမှာ Ziraat Bank မှ 100.000 lira ၏ချေးငွေဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်နှစ်တွင် 50 ၏ပေါင်တစ်ထောင်ချေးငွေကိုနောက်နှစ်များတွင်ချပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်အကုန်အထိ 1908 480 ဟာပေါင်တစ်ထောင်ချေးငွေကိုပေးခဲ့တယ်။ ဤအခြေအနေသည်ချေးငွေအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့် Ziraat Bank သည် Ottoman ဘဏ်မှအတိုးကိုချေးယူခဲ့သည်။ ဟီဂါပါရှိရထားဘူတာနှင့်ဟီဇက်စ်၊ ထို့နောက် Basra သို့စတင်ခဲ့သောဤအကြီးစားစီမံကိန်း၏ရည်မှန်းချက်မှာတိုင်းပြည်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များနှင့်အလှူငွေများကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့လိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Hejaz စီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့။ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှဗြိတိသျှတို့သည် Bedouin လူမျိုးစုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အစွမ်းကုန်အားနည်းနေပြီးမီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ Bedouins သည်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့် 15 စစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘက်ဒူဝင်လူမျိုးစုများသည်ပြောက်ကျားစစ်ကိုအပြည့်အ ၀ ပေးနေသည်၊ စစ်သားများနှင့်စစ်တပ်နယ်မြေတွင်တပ်ရင်းများပါ ၀ င်ပြီးစစ်သားအမြောက်အများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အခြေအနေကအခြေအနေတွေဖြစ်လာတော့အလုပ်သမားတွေကိုသေနတ်တွေပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အလုပ်သမားတွေကြောင့်ကျနော်တို့ဒီစစ်သားတွေနဲ့အတူဒီစီမံကိန်းကိုလုပ်နေတယ်။
စစ်တပ်တပ်ရင်းများကအလုပ်သမားများအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ဥရောပကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်ခန့်ကျဆင်းခဲ့ပြီး 3.5 သည်ပေါင်သန်းအထိပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒီဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်လက်ရာ၏ 1.7 သန်း။ ကုန်ကျစရိတ်ရှိကြ၏။ (ထိုကာလအတွင်းအော်တိုမန်ဘတ်ဂျက်သည် 18 သန်းဖြစ်သည်)
Bedouin ၏တိုက်ခိုက်မှုများသည် Bedouin အားအနှောက်အယှက်ပေးခဲ့ပြီးအလုပ်ကိုရှည်စေခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုထားသည့်အခွင့်ထူးများဖြင့် 1916 သည်မဟာ Hejaz ပုန်ကန်မှုအားဗြိတိသျှမက္ကာရှိ Emir Emir ရှိ Syif Hussein အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်အထိ! (El Ula နှင့် Medina 323 ကြားရှိကီလိုမီတာ 1 ကိုစက်တင်ဘာလ 1908 တွင်တရားဝင်အခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်သည်)
ဒီအကြီးစားစီမံကိန်းအတွင်း; 2666 အပြည့်တွင်ပန်းရံတံတားများ၊ နောက်တဖန်;7သံတံတား၊7ဘောဇဉ်ကန်၊9ဘောဇဉ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၊ Haifa၊ Der နှင့် Maan ရှိ3စက်ရုံနှင့် Kadem ရှိအလုပ်ရုံကြီးတစ်ခုနှင့်စက်ခေါင်းများနှင့်လှည်းများပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ တဖန်တုံ၊ ဟိုင်ဖာရှိဆိပ်ခံတံတားကြီး၊ ဘူတာရုံကြီး၊ ဂိုဒေါင်များ၊ စက်ရုံများ၊ အလုပ်သမားများ၏အဆောက်အအုံများ၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဆောက်အအုံရှိမက်ဒီနာရှိ 1 ပြုပြင်ရေးဆိုင်။
Maan ရှိဟိုတယ်တစ်ခု၊ Tebuk နှင့် Maan ဆေးရုံ၊ Der'a နှင့် Semah ရှိဘူဖေးများနှင့်နေရာများစွာတွင် 37 ရေတိုင်ကီနှင့်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွင်း Damascus နှင့်မက်ဒီနာအကြားပျံသန်းမှုသုံးခုရှိခဲ့သည်။ မီးခွက်; တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စနေနေ့တွင် 07.00 နှင့် 10.00 အကြား၊ မွန်းတည့်ချိန်တွင် 13.00 သည်လည်းထွက်သွားသည်။ သူသည်တနင်္ဂနွေ၊ ကြာသပတေးနှင့်သောကြာနေ့တစ်ချိန်တည်းတွင်မက်ဒီနာမှထွက်ခွာခဲ့သည်။
ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသောဆင်းရဲသားဘုရားဖူးများကိုရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့သွားလာခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယခင်ကဒမတ်စကတ် - မက်ဒီနာလမ်းကြောင်းကိုကုလားအုတ်များနှင့်တစ်နေ့လျှင် 40 ကရောက်ရှိခဲ့ပြီး Hicaz မီးရထားသည် 72 သို့ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဒီကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းမှာအော်တိုမန်နိုင်ငံသားတွေပဲအလုပ်ခန့်ခဲ့တယ်။ ”
Neden Hicaz မီးရထားလမ်းကိုဘာလို့ပြည်တွင်းအရင်းအနှီး၊ အလှူငွေများ၊ ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်တို့အတွက်ရထားလမ်းခွင့်ပြုချက်ကိုကန့်သတ်ရန်နောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဂျာမနီကိုဟန်ချက်ညီသောအရာအဖြစ် 1878 ကတည်းကအော်တိုမန်များ၏နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည် နောက်တဖန် 1882 သည်အီဂျစ်ကိုဗြိတိသျှတို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာလင်သဘောတူညီချက်မတိုင်ခင်အင်္ဂလန်ကိုဆိုက်ပရပ်စ်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာခဲ့ပေမဲ့ရုရှားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတို့ကငါတို့နဲ့မတူခဲ့ဘူး 1881 သည်တူနီးရှားရှိပြင်သစ်တပ်များ၊ ဗြိတိသျှတို့၏သိမ်းပိုက်မှု၊ အခြေအနေအားလေ့လာရန်အော်တိုမန်အင်ပါယာတွင်အီဂျစ်တို့၏ကျူးကျော်မှုနှင့်အမျိုးသားပေါ်လစီများကို ဦး တည်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကဂျာမန်များသည်ရုရှား၊ အင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကိုဆန့်ကျင်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
II ကို။ Abdulhamid ဟာဂျာမန်တွေကိုလှည့်စားခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျာမန်တွေဟာအခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲကျွန်တော့် Ottoman အင်ပါယာရဲ့နယ်မြေကိုမျက်စိမမြင်ခဲ့ကြလို့ပါ။ တနည်းကား၊ ဗြိတိသျှ + ပြင်သစ်တို့ကဲ့သို့ရုရှားတို့သည်အော်တိုမန်များကိုဖျက်ဆီးရန်သူတို့နှင့်သဘောတူရန်မလိုချင်ခဲ့ ရုရှားများသည် 1770 şeşmeစီးနင်းမှုနှင့် 1774 Küçük Kaynarca စာချုပ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ တဖန်ရေတပ်သည် Navarin (1827) နှင့် SYNOP Raids (1853) နှင့်ရေတပ်ကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ကဒီအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Küçük Kaynarca သဘောတူစာချုပ်အရအော်တိုမန်များသည်သြသဒေါက်စ်၏ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအော်တိုမန်များသည်ရုရှားရှိမွတ်စလင်များ၏ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဤKüçük Kaynarca သဘောတူညီချက်နှင့်အတူအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံစံကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ (Sultan I. Abdulhamid period-1774) နောက်ဆုံးကာလတွင်အော်တိုမန်အင်ပါယာအသုံးပြုခဲ့သောအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့သည်ဒီသဘောတူညီချက်ဖြင့်မွေးဖွားလာသည်။ Yavuz Sultan Selim အပေါ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကောလာဟလတွေကမမှန်ကန်ပါဘူး။
အခုဘာလို့ငါရေးခဲ့တာလဲ။ Haydarpaşaမီးရထားဘူတာသည်ရှည်လျားသောနာကျင်မှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်နားလည်မှုပြန်လာပြီးနောက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် Ottoman အင်ပါယာတွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်၏အမှတ်အသားဖြစ်စေပြီးပါရီမြို့၏ Eiffel Tower ကဲ့သို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမျက်စိကျစေသော်လည်း၎င်းသည်မသတ်မှတ်ထားသောဆိုင်းဘုတ်များကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိုင်းပြည်အားကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုပေးသည်။ ဤစီမံကိန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီးဌာနများ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပဲဖော်ပြထားသောအကြောင်းရင်းတူရကီရဲ့ကြယ်ပွင့်သတိပေးယူဖို့လည်းလိုအပ်ရှိမရှိနှစ်ဦးစလုံး IMM ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်။ "
ဘယ်မှာရထားမယနေ့အဘယ်သူမျှမ Dalaman မီးရထားဘူတာအထိ
နှုတ်ဆက်ပါတယ်, အစဉ်အဆက် Conjunction Dalaman ဘူတာများတွင်ကြုံတွေ့မဟုတ်